Nala Soo Xiriir Medicaid | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Nala Soo Xiriir Medicaid
Medicaid nala soo xiriir Context link
U hel qorshaha saxda ah ee Medicaid adiga ama qof kale
Hel qorshe Context link
Su'aalaha Medicaid ama Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP) Context link
Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan qorshayaashayada Medicaid/CHIP? Kala xiriir UnitedHealthcare telefoonka ama boostada.
Ka xulo qaybta hoos gobolkaaga si aad u hesho macluumaadka xiriirka ee qorshahaaga.
Arizona California Florida Hawaii Indiana Kansas Kentucky Louisiana Maryland Michigan Minnesota Mississippi Missouri Nebraska Nevada New Jersey New York North Carolina Ohio Pennsylvania Rhode Island Tennessee Texas Virginia Washington Wisconsin
1-800-348-4058 TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
1-800-293-3740 TTY 711
1-866-270-5785 TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, waqtiga maxalliga
1-888-716-8787 TTY 711
24 Saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.
Health and Home Connection
1-800-791-9233 TTY 711
Isniinta - Jimcaha,, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo.
Medicaid (MMA) iyo LTC
MMA - 1-888-716-8787 TTY 711
LTC - 1-800-791-9233 TTY711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
QUEST Integration Program
1-888-980-8728 TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 7:45 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Waqtiga Maxalliga
1-800-832-4643 TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST
1-877-542-9238 TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.
Qorshaha Bulshada (Community Plan)
1-866-293-1796 TTY 711
Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
1-866-675-1607 TTY 711
1-800-318-8821 TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ET
1-800-903-5253 TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga, 7 maalmood toddobaadkii
Families and Children Medical Assistance
1-888-269-5410 / TTY: 711 ama isticmaal adeegga gudbinta ee aad doorbidayso
8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waqtiga maxalliga, Isniinta - Jimcaha
1-877-743-8731 TTY 711
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida iyo Axadda ugu horrayso ee bil kasta laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
1-800-992-9940 TTY 711
1-866-292-0359 TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, CT
1-800-641-1902 TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, CT, 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, MT
Heritage Health Enrollment Center
Heritage Health Adult Expansion
1-800-962-8074 TTY 711
Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-941-4647 TTY 711
24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii
1-888-617-8979 TTY 711
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST
Isniinta - Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, EST
1-888-565-8170 TTY 711
8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, EST, 7 maalmood toddobaadkii
1-800-493-4647 TTY 711
1-800-349-1855 TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, ET Marka Laga Reebo Fasaxyada Gobolka
1-800-895-2017 TTY 711
Isniinta - Jimcaha 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
Connected® for MyCare Ohio
Isniinta, Talaadada, Khamiista, Jimcaha: 7:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo.
Arbacada: 7:30 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Sabtida ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Axadda ugu horreysa ee bil kasta: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Community Plan for Families
1-800-414-9025 TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Waqtiga Maxalliga
Community Plan for Kids
Rhody Health Partners
1-800-587-5187 TTY 711
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.
Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-690-1606 TTY 711
1-888-887-9003 TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.
1-877-597-7799 TTY 711
Isniinta – Jimcaha 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, waqtiga maxalliga.
Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533 TTY 711
Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus)
1-844-752-9434 TTY 711
7 maalmood toddobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo, waqtiga maxalliga.
Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
Community Plan of Virginia FAMIS
1-877-542-8997 TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, PT
1-800-504-9660 TTY 711
Isniinta ilaa Jimcaha, 7 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Waqtiga Maxalliga
1-866-622-7982 TTY 711
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.17.2022 waqtiga 11:10 SUBAXNIMO CDT
Waad ka baxaysaa degelkan.
Xiriiriyahan ayaa la diyaariyaa si aad macluumaad uga hesho mareegta qolo saddexaad. Xiriiriyahan ayaa loo bixiyaa oo keliya si habboon, mana ahan ayidida waxa ku jira mareegta ay leedahay qolo saddexaad ama alaab ama adeeg kasta oo lagu bixiyo mareegtaas. Annagu mas'uul kama nihin alaabaha ama adeegyada la bixiyo ama waxa ku jira degel kasta oo nagu xiriirsan ama xiriiriye kasta oo ku jira shabakad nagu xiriirsan. Ma samayno wax matalaad ah oo ku saabsan tayada alaabaha ama adeegyada la bixiyo, ama waxa ku jira ama saxnaanta agabyada ku jira mareegaha caynkaas ah.
Gudub (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)